Ahoana ny fomba hamantarana ny fikotranan'ny hafanana amin'ny alika | Alika Manerantany
Susy fontenla | | aretina, Alika ankapobeny
Ao anatin'ny vanim-potoana mafana isika, ary mila ihany koa ny alikantsika Ankafizo ny ety ivelany. Na izany aza, tsy maintsy jerentsika foana ireo lafin-javatra sasany mety hametraka loza amin'ny biby fiompintsika raha mafana loatra ny mivoaka. Satria izahay mampiharihary anao amin'ny mety hahavoa ny hafanana mampidi-doza anao.
Hotantarainay aminao ny fomba fantaro ny famelezana hafanana, fa ilaina ihany koa ny mitadidy ao an-tsaina fa rehefa misy fisalasalana dia tsara indrindra ny misoroka foana ny ora afovoan'ny andro mandeha. Indrindra raha miresaka momba ny alika Nordic misy volo be na karazan'alika toy ny English Bulldog, izay noho ny vavony fohy dia mazàna miaina ratsy kokoa.
Tokony ho fantatsika fa ny vatan'ny alika dia tsy miasa toa ny antsika, ary izy ireo koa tsy manana fihary hatsembohana betsaka toy izany izy ireo, ary ireo dia mifantoka amin'ny pads azy, fa rehefa lasa mafana be izy ireo dia ny lela no mampangatsiaka, miaraka amin'ny panty. Ny fitifirana haingana sy mitohy dia tsy isalasalana fa ho famantarana voalohany fa mafana be ny alikantsika. Mampatahotra indrindra amin'ny alika izay tsy miaina tsara toy ny Bulldogs.
Ny soritr'aretina hafa dia mety ho fanina, fa ny alika tsy afaka mandeha, manana tachycardia ary mandoa na mivalana mihitsy aza. Alohan'ny hahatongavantsika amin'izany, rehefa tsikaritsika fa ny alika dia manana hafanana be loatra dia tsy maintsy mitady toerana mangatsiatsiaka ao anaty alokaloka isika mba hipetraka sy hampangatsiaka ny alika amin'ny rano raha ananantsika eo am-pelatanany.
Tsy tokony handray hafanana hafanana amin'ny zavatra kely ianao mampidi-doza satria. Betsaka ny alika izay, mijaly noho ny famelezana hafanana be, dia maty, ka amin'ny soritr'aretina voalohany dia tsara kokoa ny misafidy fialan-tsasatra amin'ny rivotra madio. Ary ambonin'izany rehetra izany dia tokony hadinontsika ny manery alika antitra, alika kely na alika misy aretim-po mandritra ny ora mafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Ahoana ny fomba hamantarana ny hafanana amin'ny alika